PressReader - Isolezwe: 2018-06-15 - Omasitende bakhala ngenkosi ebafuna oR10 000
Omasitende bakhala ngenkosi ebafuna oR10 000
BAKHALA ngokuxhashazwa yinkosi omasitende bezitolo zaseMagabheni abathi bahlawuliswa uR10 000 ngenxa yokuqashisa abokufika kuzo.
Labo masitende abahlala ku-ward 4 no-ward 5 bathi inkosi yasemaThulini, uPhathisizwe Luthuli, ibize bonke abahlala kulawa ma-ward abaqashise abokufika ngamakhonteyna emagcekeni abo, ababaqashisele ngezitolo nezakhiwo ezingasasebenzi ukuthi bakhokhe uR10 000 kuyona, ngo-Ephreli.
Kulo mhlangano inkosi kuthiwa itshele labo masitende abaqashise osomabhizinisi bangaphandle ukuthi iziqashi zabo kumele zikhokhe uR10 000 kuyo ekupheleni kwenyanga noma ekuqaleni kukaJulayi.
Omunye wosomabhizinisi bendawo obambisene nomuntu wangaphandle ebhizinisini ongathandanga ukudalulwa uthe yena usesatshiswe ngokuthi uma engayikhokhi le mali ikhonteyna izovalwa.
“Inkosi iyasixhaphaza. Uma ikubizile kumele ukhokhe uR150 oyizinyawo zenduna esuke ithunywe ukuthi izokubiza, ingakaqali ukukhuluma.
Uma usuyikhokhile bese ikhuluma lokho efuna ukukukhuluma, asinikwa ithuba lokuthi sibuze imibuzo ngale mali, izinduna zisitshela ukuthi inkosi ayiphendulwa. Angazi ukuthi sisuke sikuphi isidingo sokuthi sibizwe uma singavumelekile ukuthi sibeke uhlangothi lwethu. Inkosi ikhuluma sengathi yithi esingenise abantu bangaphandle kwakuleli kanti cha, asibazi ukuthi bangena kanjani kuleli, thina senza ibhizinisi nabo. Mina ukube bengingasebenzisani nalo engisebenzisana naye ngabe sengiwile ngoba ngase ngihluleka ukuqhuba ibhizinisi lami ngemuva kokuntshontshelwa isitokwe sami,” kusho yena.
Uqhube wathi kulabo masitende akekho ongachaza ukuthi le mali izokhokhwa kangaki.
“Ukube besinethuba besizochaza ukuthi sithola malini ngenyanga nokuthi kungani sizihlanganise nabantu bangaphandle, kodwa-ke besitshelwa, besingabuzwa lutho. Inkosi isebenzisa isikhundla sayo ukusixhaphaza,” kusho yena.
Ithinthwa ngalolu daba inkosi, obambe ucingo uphikile ukuthi ucingo lwayo, imiyalezo ethunyelelwe yona ezinombolweni zayo ezimbili ayiphendulwanga.